Kumanaal la dooneyo in dalka laga tarxiilo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kumanaal la dooneyo in dalka laga tarxiilo
La daabacay torsdag 3 december 2015 kl 12.50
Ciidanka ammaanka oo qoranaya shaqaale hor leh
Sawirle: Drago Prvulovic/TT
22.000 oo ka mid ah dadyoowga deggenaanshaha dalka ku waayey ayaa diiddan iney dalka isaga baxaan ama galey dhulka hoostiisa oo dalka ku dhuumaaleeysaneya. Hase yeeshee ay dawladdu iminka ku talo jirto falalkii lagu tarxiili lahaa.
Dawladda ayaa iminka ku talo jirta tallaabooyin la xiriira sidii sida ugu dhakhsiyaha badan dadyoowgaasi looga tarxiili lahaa dalka iyadoona loo marayo dhinacyo kala duwan oo ey ka mid yihiin culeeys siyaasdeed ee la saaro waddammada ey ka soo jeedaan soo-galootigaasi, wada-shaqeeyn dheeri ah ee hayadaha dalka dhex-marta iyo sidoo kale heshiisyo lala galo Afgaanistaan iyo waddammo kale iyo sidii dib loogu celin lahaa muwaadiniintooda.
Intii lagu guda jiray sannadkan ayay hayadda socdaalku ku wareejisay ciidanka ammaanka go’aammadooda dadyoow tiradoodu gaarsii-san yihiin 10.376 oo dalka diidmo ku heley iyo sidii tarxiil loogu sameeyn lahaa. Guud ahaan ciidanka ammaanka ayaa gacanta ku haya kiisaska dadyoow gaarsii-san 22 000 oo ruux, lana go’aamiyey in si khasab ah Sweden looga tarxiilo. Iyadoona goolka ugu muhiim-san ee dawladdu iminka yahay sidii sida ugu dhakhsiyaha badan looga saari lahaa dalka.
– Siyaasiyiin ahaan waa inaannu tallaabooyin dheeri ah ku dhaqaaqno sidii heshiisyo ey muwaadiniintooda ku qaabilaan soo-galootiga dalka sharci-darrada ku jooga, sida uu sheegay wasiirka arrimmaha gudaha Anders Ygeman, kana tir-san xisbiga Socialdemokraterna (S).
Labada waddan ee Sweden iyo Afgaanistaan ayuu iminkaba u socdaa wada-hadal la xiriira sidii qaxootiga dalka reer Afgaanistaan ee diidmada ku heley dalabaadkoodii dib loogu celin lahaa dalkoodii hooyo, iyadoona uu berito oo jimce ah booqasho dalkan Sweden uu ku iman doono madax-weynaha dalka Afgaanistaan Ashraf Ghanis. Halka uu safiirka dawladda Afgaanistaan dalkan u fadhiya u gudbiyay dawladda qoraa-heshiiseed ee amuurtaa la xiriira. Hase yeeshee warar laga soo xigtay war-geeyska maalinlaha ee DN aanan la aqbali doonin, balse uu qoraalkaasi u noqon doono aasaas heshiisyada wada-hadal ee soo socda.
Anders Ygeman, wasiirka arrimmaha gudaha ayaan wada-hadalkaa qayb ka ahayn, isla-markaana aanan dooneyn inuu faallo ka dhiibto. Hase yeeshee wuxuu wasiirku sheegay in dawladda uu xubinta ka yahay ay rajo wanaag-san ka qabto in mustaqbalka laga gaaro heshiis loo dhan yahay. Halka uu wasiirku dhanka kale ku howlan yahay wadammo kale.
– Marka qaarkood waxaa loo baahan yahay wada-hadal diblamaasiyadeed iyo in culeys la saaro waddammada. Waxaa jirta inaan la hadlay wasiirka arrimmaha dibadda ee Tuuniisiya mar uu safar dalkan ku joogay, waxaan la xiriiray safiirka dalka Aljeeriya u fadhiya Sweden, aniga oo sidoo kale ku howlan sidii aan kulan ula yeelan lahaa safiirka dalka Marooko u fadhiya Sweden, inkastoo ay middaasi xoogaa adkaatay, sida uu sheegay.
Tallaabo kale ee ciidanka ammaanka iyo dawladduba ku fekereyaan ayaa ah in saraakiil ka tirsan ciidanka ammaanka lagu meeleeyo safaarradaha uu dalkani ku leeyahay waddammada ey adag tahay in muwaadiniintooda sharciga dalkan looga diidey dib loogu celiyo.
– Waa hab ey u shaqeeyaan dhammaan waddammada xubnaha ka ah EU, sida uu sheegay Patrik Engström, ahna madaxa laanta ciidanka howl-galka xuduudaha ee qaran, magacoodana loo soo gaabiyo Noa.
Boliiska: Meel aannu tegi weyney kuguma celin karno
torsdag 3 december 2015 kl 13.26
Ilmaha sharcidarrada dalka ugu dhasha oo kor u sii kacaya
torsdag 3 december 2015 kl 11.10